Mgbanwe ngbanwe dị nso - Afrikhepri Fondation
Tuzdee, Septemba 22, 2020
Mgbanwe nke akụkụ dị nso
Ihe nzuzo oge ochie nke ifuru nke ndụ
Drunvalo Melchizedek bu onye ama ama na onye nkuzi na United States, onye bi na Sedona, Arizona. Ihe dị ka afọ isii gara aga, mgbe ọ gụsịrị seminarị yoga dị mkpa na Washington, ọ kesara ụfọdụ ọhụụ dị ịtụnanya ndị nduzi ya ziri ya kemgbe afọ 2010 ruo 2015.
Otutu ndi amuma na ndi amaala no na mbara uwa buru uzo buru amuma na “nnukwu mgbanwe” n’agha n’iru n’uwa, n’aru ndi mmadu nile. N'ikpeazụ, anyị na-ahụ ka ọ na-aghọwanye nke ọma n'ụdị mgbanwe nke mbara ụwa, ịrị elu ụwa dum na ọkwa ọhụrụ nke ịdị adị jikọtara ya na sayensị Kraịst, ma ọ bụ ịdị n'otu. . N'isi ikpeazu anyị ga-eji nlezianya mụọ nnukwu mgbanwe ahụ n'onwe ya na ihe anyị nwere ike ịpụta ma ghọta na ya. Mana n'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ọdịdị nke mgbanwe akụkụ na amamihe a pụrụ ịmụta site na ya, ihe anyị nwere ike ịmalite ịmalite ụwa ebe a ka mgbanwe ndị a niile wee gbanwee ziri ezi ma ghara ịkpata oke nhụjuanya. Theghọta ọdịdị nke mgbanwe a na akụkụ bụ ịchọta ụzọ iji mee ka uto ime mmụọ gị dị ngwa ma jiri ya kachasị mma n'oge anyị hapụrụ iji biri na mbara ala a dị ebube.
Mgbanwe akụkụ, dị ka aha ahụ na-egosi, bụ mgbe ụwa ma ọ bụ ahụ ọzọ dị na mbara igwe na-esi n'otu ọkwa nke uche gaa na ọzọ na site n'otu akụkụ nke ịdị adị gaa na nke ọzọ. N'okwu anyị, anyị ga-ahapụ akụkụ nke atọ iji banye nke anọ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, mbara ụwa dum, tinyere ihe nile dị n’elu ya ma ọ bụ n’ime ya, ma ọ bụ ọbụna n’elu ya, ga-enweta ụzọ a dị adị site n’otu akụkụ gaa n’ọzọ. Ativemụ amaala America kwenyere na anyị na-achọ isi na World nke Anọ gafere na nke ise, mgbanwe ga-ebute ihe ha kpọrọ "ụbọchị nsacha." Enwere ihe dị iche gbasara oge na mgbe, ebe ọ bụ na ọdịnala ha, ha na-ewere oke ihe efu dị ka ụwa ma yabụ mee ka ha gbakọọ. Ya mere, akụkụ nke atọ, site na Melkizedek, na nke anọ, dị ka ụmụ amaala America si kwuo, bụ otu ihe.
Ọ bụrụ na nke a bụ nhọrọ gị, gị onwe gị nwekwara ike ịghọta ụdị mgbanwe a maka akụkụ ọzọ nke ndụ, ụwa ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike bụrụ ngbanwe dị oke ọsọ, anyị nwere ike ịhụ ụdị ya ma ghọta ihe mgbanwe ndị a bụ nke anyị ga-agabiga. Ọ na-ewelite ihe mkpuchi banyere ihe ndị na-eme n’ụwa ugbu a ma kọwaa ihe kpatara ha, nke na-eme ka uche na obi na-abanyekwu, ka anyị na-agabiga n’oge mgbanwe a.
Awa ise na isii tupu mgbanwe nke akụkụ
Site na echiche mmadụ, oge a abụghị ihe ijuanya, ọbụna na-akpata nsogbu. Taos, nke India nke a mụrụ m mgbe mbụ m bịara n'ala a [na narị afọ gara aga, NDE] (na nke nwere ike ịbụ isiokwu gbasara akụkọ ọzọ na-adọrọ mmasị), na-agwa ndị otu n'ime ndị bi na ha ka ha nọrọ, mgbe oge ruru, n'ime ụlọ obibi ha, iji gbochie ìhè ịbanye site n'ịdọba ákwà mgbochi, iji zere ile anya ma na-ekpe ekpere. Ịgbalị ịhụ ihe na-eme n'èzí ga-eme ka ụjọ, mmetụta uche iji zere mgbe ọ bụla ị na-eche ụdị ọnọdụ a.
Mgbe ahụ, ihe dị ịtụnanya ga - eme n'oge ahụ: akụkụ abụọ ga - apụtụ ntakịrị. Ị nwere ike ịnọ ọdụ n'ime ụlọ gị, ebe ihe na-apụta na mberede, na-enweghị ike ịkọwara gị ya. Ọ ga-abụ ihe nke anọ nke na-enweghị ihe jikọrọ ya na eziokwu dị ka ị ghọtara ya ruo mgbe ahụ. Ị ga-ahụkwa agba ndị ị hụtụbeghị na ndụ gị. Ha ga-egbuke egbuke, ha ga-elekwa anya n'ime. Ụdị ga-apụta na ị gaghị enwe ike ịkọwaara onwe gị na nke ahụ ga - eyi ka ọ na - etinye ìhè nke aka ha kama igosipụta ya. Ihe ndị a ga-abụ ihe kachasị njọ ị hụtụrụla. Atụla ụjọ, nọrọ jụụ, nke a bụ ihe okike!
M na-atụ aro ka ị ghara imetụ ihe ndị a aka. Ọ bụrụ na i mee ya, ọ ga-adọta gị n'otu ntabi anya na ọsọ ọsọ na mpaghara nke anọ. Ọ ka mma ịbanye n'ime nwayọọ nwayọọ. Ma ọ bụrụ na ihe a na-apụghị izere ezere, ọ ga-abụ uche Chineke.
Ọnọdụ ụwa niile gbanwere
Onye ọ bụla bi na mbara ala a enweelarị mgbanwe na akụkụ. Naanị ihe a ga-amụ n'ụwa bụ otu. Ọ bụ eziokwu. N'agbanyeghi ebe anyi si bia, anyi nile aghaghi igabiga ihe ozo tutu anyi abia ma obu ndi ozo n'uwa, nke a bu mgbanwe nke uzo. Ụbọchị a mụrụ gị ebe a dị ka nwatakịrị, ị gbanwere mgbanwe. Ị si n'otu ụwa gaa na nke ọzọ. Ọ bụ naanị maka ncheta ụmụ mmadụ na-enweghị oke na anyị echetaghị ihe ọbụla.
Eziokwu nke enweghị ike icheta ebe anyị nọ nakwa ihe anyị na-eme tupu oge amụọ anyị abụwo ihe kpatara oke ike. Otu n'ime ihe ndị a bụ enweghị ike ịchọta echiche (ma ọ bụ eziokwu) na e nwere nanị ebe dị anya iji gaa na mbara igwe. N'okpuru ebe a, n'eziokwu anyị, ọhụụ interplanetary ma ọ bụ intergalactic dị nnọọ ukwuu nke na anyị apụghị ịgafe ha. Anyị enweghị ike ịhapụ usoro mbara igwe anyị, ebe ọ bụ na ọnọdụ anyị dị ugbu a, anyị bụ ndị mkpọrọ nke ụlọ anyị.
Ọ bụghị eziokwu? Ịga njem dị anya na mbara igwe, dị ka ụzọ anyị si azụpụta oge na ohere agaghị ekwe omume. Ndị ọkà mmụta sayensị anyị eruola nkwubi okwu a. Ma, n'ezie, ọ na-akụda mmụọ ikweta na anyị agaghị enwe ike ịhapụ usoro mbara igwe anyị na ihe anyị maara taa. Ka anyị kwuo na anyị chọrọ ịga kpakpando ọzọ. Alpha Centauri, ihe dị ka afọ anọ site na Ụwa. Ọ bụrụ na anyị ga-eji nkà na ụzụ anyị ugbu a, anyị ga-aga njem maka afọ 115. Ụmụ mmadụ adịghị ebi ogologo oge, nke ahụ doro anya, kpakpando a bụkwa nke kacha nso! O doro anya na ọ gaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ihe ịga nke ọma, anyị kwesịrị ịgbanwe nghọta anyị banyere oge na ohere.
Nsogbu a, na echere m na m kwuru nke a tupu oge a, bụ na anyị na-atụle naanị oge na ohere; anyị efuola echiche nke akụkụ ịdị adị. Ma na ihe ka zuru oke dika ha di, anyi amalitela icheta ya, mgbe anyi choro ya! Ọ na-abịakwute anyị ọzọ na nrọ anyị, mgbe ahụ na fim anyị. Naanị anyị ga-eche banyere Star Trek, Kpọtụrụ, Sphere na ọtụtụ ndị ọzọ, ha niile na-enyocha echiche nke akụkụ dị iche iche nke mmega ahụ. Anyị ga-echeta nke a, n'ihi na Chineke nọnyeere anyị mgbe niile.
Ka anyị mee ihe a. M ga-akọwa kpọmkwem ihe merenụ n'oge mgbanwe nke akụkụ, m ga-enwetakwa nkọwa niile site na ahụmịhe m. Ya mere, ihe ga - eme n'oge na - adịghị anya n'ihi na anyị nile nwere ike ịdịtụ iche, n'ihi na eluigwe na ụwa na - emegharị ahụ mgbe niile. O nwere ike ịbụ na ụfọdụ n'ime gị na-ahọrọ m ịkọrọ gị ihe a niile n'ụdị obere akụkọ, mana echere m na na nke a, ụzọ ziri ezi kwesịrị ekwesị.
Ahụmahụ nke mgbanwe zuru ụwa ọnụ nke akụkụ
Cheta na ihe m na-achọ iziga ebe a bụ ihe ederede galactic ga-ekpughere gị. Nke a bụ nanị ọnọdụ dị na mbụ. Enwere ike inwe ọtụtụ nkọwa dị iche iche, n'ihi na ndụ na-agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, ma ọ bụrụ na ị maara ụkpụrụ ahụ, ị ​​nwere ike ichetụ n'echiche.
Ka anyị na-abanye na narị afọ iri ọhụrụ a, ndị nwe ụlọ ahụ na-eche na a ga-enwe ntakịrị ime ihe ike ka anyị na-abata mgbanwe, n'ihi na anyị na-alaghachi n'okporo ụzọ ahụ. Anyị arụsiwo ọrụ ike n'ọgbalị anyị ịmepụta akọnuche mmadụ ọhụrụ! Ya mere achọrọ m ka ị dị jụụ ma ghara ichegbu onwe gị ọzọ. Nwee egwu ikiri mgbanwe a. Ka ị na-agba akaebe maka izu okè nke ndụ, ị nwere ike ịdị ka obere nwatakịrị ị na-achọ ịbụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ okwu gị. Mara na anyị ga-elekọta gị nakwa na ịhụnanya dị ọcha ebutelarịrị ihe omume. Mmiri ike a dị nnọọ ukwuu karịa anyị nile na nchebe kachasị mma ka ga-ahapụ kpam kpam na ya ma bụrụ, n'ụzọ dị nnọọ mfe.
O yikarịrị ka ọ bụ na ugbu a, anyị agbanweela ins na mpụga nke oge a nke ọgba aghara nke ga-adịgidekarị site na ọnwa atọ ruo afọ abụọ. Ugbu a, ekwerela na ebe dị elu ga-adị mkpụmkpụ ma ọ gaghị enwe ime ihe ike. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịdọ aka ná ntị ọ bụla n'ụdị ọ bụla anaghị atụ anya ọzọ, belụsọ maka oge mgbanwe n'onwe ya, nke ga-adịru site na elekere ise ruo isii. O yikarịrị ka ị ga-eteta n'otu ụtụtụ mara mma wee hụ onwe gị dị ka nwatakịrị n'ihu ụwa ọhụrụ tupu ọdịda anyanwụ.
Nnukwu ihe efu nke ụbọchị atọ nke ọchịchịrị dum
N'ikpeazụ, eziokwu niile ejiri ọla edo edo edo na-ebelata ma jiri nwayọ nwayọ. Agba ọla edo, na-acha ọkụ ọkụ ma na-enwu gbaa, ruo mgbe ụwa dum dabara n'ọchịchịrị, nke na-atụgharị ink kachasị oke ojii wee kpuchie gị n'ime ya. Oldwa ochie gị agaala ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla, ọbụnadị aka gị na ihu gị. Realizechọpụta na ị nọdụrụ ala n'ebe ihe kwụ ọtọ, mana n'otu oge ahụ ọ dị gị ka ị na-ese n'elu ebe na-adịghịzi. N'oge a, nwee ike ịghara ịtụ egwu. E nwekwaghị ihe mere a ga-eji tụọ egwu. Usoro ị na-agabiga bụ ihe okike. Entered banyere ugbu a, n'etiti nke atọ na nke anọ, nnukwu oghere nke ihe niile pụtara n'otu oge na nke ihe niile na-alaghachi otu ụbọchị ma ọ bụ nke ọzọ. Have banyela n'ọnụ ụzọ, n'etiti ụwa abụọ Enweghị ụda, enweghị ọkụ live na-ebi ndụ na-enweghị mmetụta niile.
Enweghị ihe ọ bụla ị ga-eme kama ichere ma nwee obi ekele nye Chineke maka mmekọrịta a nke ị ka na-eche n'etiti gị na nke ahụ, ma ọ bụ ihe ọ bụ, site na mgbe ebighị ebi. Site n'ebe ahụ, ị ​​ga-ehi ụra ma malite nrọ. O zuru oke. Ọ bụrụ na ị rọrọ nrọ, ọ ga-adị ka ogologo oge, ọ bụrụgodị na ọ ga-abụ ihe dị ka ụbọchị atọ.
Ka anyị kwuo okwu nke ọma site na ịgbakwunye na oge a nwere ike ịdịru n'etiti ọkara ụbọchị (oge kachasị dị mkpirikpi edere). Nọmalị, oge na-ewe ụbọchị atọ na ọkara. Nke a bụ ụbọchị ụwa, oge nnwale ma ọ bụghị nke dị adị n'ezie, maka oge dịka anyị na-ewerekarị na ọ dịghị adị. Biala ugbu a na "njedebe nke oge" nke ndị Mayan, Ndị Kraịst ma ọ bụ ndị otu ndị ọzọ kwuru.
Ahụmahụ na-esonụ dị oke egwu. Mgbe ị na-esegharị na efu na ọchịchịrị gbara ihe dịka ụbọchị atọ, ọ nwere ike ịdị gị ka, n'otu ọkwa gị, na otu puku afọ agafeela. Ọ bụ mgbe ahụ n'ụzọ a na-atụghị anya ya na n'otu ntabi anya, ụwa gị na-agbawa n'ime ọkụ na-acha ọcha. Ọ bụ ìhè kachasị mma nke ị hụtụrụla, ọ na-ewe ogologo oge tupu anya gị agbanwee ma enwere ike iji ike nke ọkụ ọhụrụ a mara gị.
O yikarịrị ka ahụmahụ a ọ ga-adị ọhụrụ nye gị, na ihe ị ghọọ n'ezie ka e jiri ya tụnyere nwa ọhụrụ nke a mụrụ naanị na ọ dị ọhụrụ. Ịmalite ndụ ọhụrụ, dị ka mgbe ị rutere n'ụwa. Ị si ebe gbara ọchịchịrị ruo n'ikpeazụ ghọọ ụwa jupụtara n'ìhè, ma i kpuchiri ìsì ma chịkwaa gị. Ọfọn, ahụmahụ ọhụrụ a yiri nnọọ ọtụtụ ụzọ. Ekele! Emeela ka a mụọ gị n'ụwa ọhụrụ karịa ka ị na-ahapụ!
Mgbe ị mechara gbanwee ka ọkụ nke ọkụ ọhụrụ a - nke nwere ike iwe oge, ị ga-ahụ agba ndị ị hụtụbeghị mbụ; n'eziokwu, ị maghịdị na ụdị agba ndị a nwere ike ịdị. Ihe niile gbasara ahụmịhe ọhụụ ọhụụ a ga - abụ ihe ịtụnanya na amaghị ama nye gị.
N'ezie, nke a bụ ịmụ mmadụ ọzọ. Mgbe a mụrụ gị n'ụwa, ị dị obere ma nọgide na-eto eto. Anyị na-echekarị na ọnọdụ okenye bụ njedebe nke uto. Ihe m ga - agwa gị nwere ike iyi gị ihe ijuanya, mana mara na otu nwoke toro eto na akụkụ nke atọ a na-ewere ya dị ka nwa na anọ. Dịka dị n'okpuru ebe a, anyị na-amalite ito eto site na ebe a, rue mgbe anyị ruru ogo mmadụ na ụwa ọhụrụ anyị. N'ezie, ndị mmadụ dị ukwuu karịa nke anọ. Otu nwoke tozuru etozu n'ogologo ya site na mita anọ ruo mita anọ na asatọ, na nne nwanyị, site na mita atọ ruo mita atọ na iri asaa.
Ahụ gị ga-ahụ siri ike, dịka ọ dị n'ụwa, ma ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere akụkụ nke atọ, ọ dịghị ma ọlị. Ọ ka nwere ngwugwu atumatu, ma na ọkwa dị elu. Ị ghọọ onye a na-agụnye ọtụtụ ike na obere ihe. Na ụwa, ịnwere ike iji mgbidi a gafee mgbidi, ma na nke a dị ọhụrụ, ahụ gị siri ike ma guzosie ike na aka. Ọmụmụ a ọzọ ga-abụ ndụ ikpeazụ gị n'ụwa nke usoro ahụ dịka ị maara ya ruo mgbe ahụ. Na nke ise, nke ị ga - amata n'oge nke anọ, ndụ anaghịzi egosipụta ya. Ọ bụ ọnọdụ nke maara ihe, na-enweghị ọdịdị. Ị gaghị enwe ahụ, ma ị nwere ike ịnọ ebe niile n'otu oge.
Na nke anọ, oge dị nnọọ iche. Minit ole na ole na ala ebe a ruru ọtụtụ awa, ya mere, ị ga-etoru ogo mmadụ na ihe ga-abụ afọ abụọ. Ma dị ka ebe a, ọ bụghị nanị ihe mgbaru ọsọ ahụ na-eto eto. Otutu ihe omuma na omuma ga abu ihe siri ike iche n'echiche nke onwe gi ga-abanye mgbe i tinye uzo anọ maka oge mbu. Anyị nwere ike iji ya tụnyere nwa ọhụrụ, onye ka na-enweghị ike ịghọta ihe kpakpando bụ.
Ngbanwe a pụrụ iche
Anyị ekwuolarịrị ihe na-eme mgbe mbara ala rutera nke anọ. Ugbu a, anyị ga-ekwupụta echiche ọhụrụ banyere ihe nwere ike ime n'ụwa na mmalite nke narị afọ nke iri na itoolu na puku afọ nke atọ. Mgbe ụfọdụ, mbara ụwa nwere ike igosipụta oge iji mee ka mgbanwe dịkwuo mfe. Mgbe ahụ, ọ ga-eru n'akụkụ ọzọ, ma ime otú ahụ, ọ ghaghị imegharị akụkụ ochie ahụ n'ụzọ dị ka ọ ga-esi mezuo karma ochie ahụ ma si otú a mee ka mgbanwe ahụ ghọọ akụkụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ. Nke a bụ ihe dị egwu ma o kwere omume nke na-achọkarị ọkwa dị elu iji kpasuo ya iwe.
Dabere na Edgar Cayce, a gbanwere axis nke ụwa "n'oge oyi nke afọ 1998", mana ihe a emeghị. Dịka amụma ndị ọzọ si kwuo, site n'August 11, 1999, ma ụwa ọ ga-abanye n'akụkụ ọzọ, ma ọ bụ na ọ ga-ebibi onwe ya. Ma onweghi ihe yiri ya nke mere. N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịbụ na anyị anọworị n'akụkụ nke anọ n'amaghị ama? O kwere omume.
Okwu a buru ibu nke na enweghi m ike ịkọwa ya. Ikekwe ụzọ kachasị mma isi kwurịta ihe a bụ ịjụ, sị, "Ebee ka ọkwa a dị elu nke sitere na nke ahụ ga-eme ka mgbanwe dị otú ahụ mee? O kwere omume na ọ bụ site na ụmụ ọhụrụ a mụrụ na mbara ụwa n'oge a, onye maara ihe nke ọma na-emetụta nke anyị, ndị bịakwara ebe a n'ihi nke a nanị. Taa, ọtụtụ ụmụaka bụ ndị mmụọ dị elu dị elu nke bịara n'ụwa iji nyere anyị aka site na mgbanwe a gaa ụwa ọhụrụ.
Gifmụaka ndị nwere onyinye a nwere ikike ibute ụzọ na mgbanwe a site na ụwa anyị gaa n'akụkụ ọzọ nke ịdị adị, na nke a, n'ihi ụzọ pụrụ iche. Anyị niile nwere ike na-ahụ ọrụ ebube na-eme ugbu a n'anya anyị ugbu a, ihe omume mere eme, ma ọ bụrụ na e nwere otu. N'ihi nghọta ha dị oke elu na ọkwa zuru ụwa ọnụ, ha nwere ikike ịmeghachi ụwa nke akụkụ nke atọ na nke anọ, - n'ụzọ dị ka mkpụrụ obi ọ bụla efu n'oge mgbanwe - nke Ekwenyere m na ọ bụ ọchịchọ ha kachasị mma. Ọ bụrụ otu a, anyị nwere ike ịgbanwe okwu Jizọs wee sị, “A ga-akpọ ọtụtụ, a ga-ahọpụta mmadụ niile. »Ekwere m na Jizọs ga-a beụrị ọ overụ. N’ezie, nke a abụwo mgbe nile nnukwu nrọ nke elu-igwe; mgbanwe nke na-enweghị mkpụrụ obi ọ bụla funahụrụ ya, ebe onye ọ bụla gafere ule ahụ nke ọma. Nrọ nke na-emebeghị ruo taa.
Kedu ka ụmụaka ga - esi chekwaa mbara ala n'ụzọ dị ịrịba ama? Ịdị ọcha na ịdị ọcha ha n'ụwa ndị dị elu bụ isi iyi nke ihe okike niile. Oburu na umuaka ndia di, odi nma na Chineke agbaziwo ayi nile site n'amara ya.
Ouroboros Maya - ntozu nke oke okirikiri evolushọn
20,90€ dị na ngwaahịa
1 dị ọhụrụ site na 20,90 €
Ejiri 7 mee ihe site na 9,95 €
Zụta € 20,90
nke September 22, 2020 9:45 pm
Ụbọchị mwepụta 2013-03-20T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2013-03-20T00:00:01Z
Lezie agba nke afọ (2012)
Oge ntụgharị: hapụ onwe gị n'ọchịchọ ịchọta nzube - Wayne Dyer (Audio)
Chọpụta ụdị ọdịdị nke uche anyị